Vaovao - naoty momba ny fampiasana ny kasety fanondrahana mitete tsipika roa!
Fanamarihana momba ny fampiasana ny kasety fanondrahana mitete tsipika roa!
1.Raha ampiasaina amin'ny sarimihetsika fambolena ny fantsom-drano mitete, noho ny tara-masoandro, dia etona ny rano ambonin'ny tany, ary hidina ao anaty vongan-drano kely amin'ny sarimihetsika fambolena. Ireo vongan-drano kely ireo dia hamorona solomaso. Eo ambanin'ny halaviran-toerana sy ny taratry ny masoandro izay mety, ny rano mitete dia miforona faritra mafana ny fifantohan'ilay solomaso, izay handoro ny kasety mitete na handoro lavaka kely iray. Mba hisorohana ny olana toy izao dia tsy maintsy atao ireto manaraka ireto rehefa mampiasa azy:
Mampiasà sarimihetsika mulch mainty, ny sarimihetsika mulch mainty no tsara indrindra, raha mampiasa sarimihetsika mulch mangarahara ianao, dia tokony halevinao moramora ny fantson-drakitra na rakofana tany matevina mba tsy hisian'ny hazavana mahery tsy hiditra amin'ilay sarimihetsika mulch.
Rehefa ampiasaina dia tazomy araka izay azo atao ny haavon'ny tany, ary apetaho amin'ny alikaola ny famonoana alim-bary alohan'ny fambolena mba hisorohana ny ahi-dratsy tsy hitombo na ny sakana amin'ny tany tsy hihazona ny mulch ka mahatonga ny etona hanangona ao anaty mulch ary mamorona rano mitete kely.
2. Ny bibikely bibikely dia tokony hofafaina bibikely famonoana bibikely araka ny tokony ho izy rehefa maniry ny voly, ary tokony hamono ara-potoana ny bibikely mba hisorohana ny fambolena sy ny fehikibo fanondrahana mitete tsy hanaikitra sy simba.
3. Rehefa napetraky ny masinina ny fantsom-pitetezana dia ilaina ny misoroka ny fantson-drano mitete tsy ho voakorakoraky ny masinina.
4. Rehefa mametraka ny kasety fanondrahana mitete dia tokony hiatrika ambony ny lafiny misy ny dripper, ary tokony hitovy ny hery rehefa mihinjitra, ary ny tadin'ny rano manondraka mitete dia tokony hajanona mahitsy.
5. Tsy mahazo miampita ny saha ny asa fiompiana masinina, ary fady ny manoto na manitsakitsaka ny fehin-drano mitete.
6. Ny rano manondraka mitete izay miditra amin'ny fehin-drano mitete dia tsy maintsy alain'ny rafitra sivana lehibe kokoa noho ny 100 harato.
Fotoana fandefasana: Mey-31-2021